စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ ပြည်သူတွေကိုကူညီလှူဒါန်း မှု့တွေဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်း – Cele Oscar
စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ ပြည်သူတွေကိုကူညီလှူဒါန်း မှု့တွေဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်း
March 29, 2021 By L YC Celebrity
ပရိသတ်ကြီးရေ.. အကယ်ဒမီ မင်းသားကြီး ဝေဠုကျော် ကိုယ်တိုင် ဦးစီး တည်ထောင် ထားတဲ့ ဝေဠုကျော် ဖောင်ဒေးရှင်း ကတော့ အမျိုးမျိုးသော အခက်အခဲတွေ နဲ့ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် အမြဲ ဖေးမ ကူညီ တတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်..။၇ရက် သားသမီး အလှူရှင် တွေ လှူဒါန်း ထားတဲ့ ငွေကြေး တွေ နဲ့ လိုအပ် နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် ပြန်လည် လှူဒါန်းမှုတွေ ကို လုပ်ဆောင်နေပြီး လက်ရှိ အခြေအနေတွေ မှာလည်း အင်တိုက် အားတိုက်ပါဝင် အားဖြည့် လှူဒါန်း နေတာ တွေ့ရ ပါတယ်..။
ပရဟိတ အလုပ်တွေ နဲ့ လှူဒါန်းမှု တွေ နေ့တိုင်းပြု လုပ်နေတဲ့ ဝေဠုကျော် ကတော့ ဒီက နေ့မှာလည်း စားဝတ် နေရေးခက်ခဲ နေတဲ့ ပြည်သူတွေ နဲ့ စက်မှု ဝန်ထမ်းတွေ အတွက် အစားအသောက် တွေ ပေးဝေ လှူဒါန်းခဲ့ ပြန်ပါတယ်..။သင်္ဃန်းကျွန်း က ပြည်သူတွေ နဲ့ စက်မှု ဝန်ထမ်းတွေ အတွက် ဝေဠုကျော် က စားသောက် ကုန်တွေကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ အိမ်တိုင်ရာ ရောက် လိုက်လံ ပေးဝေပြီး လှူဒါန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး စေတနာရှင်တွေ အနေနဲ့ နောက်ထပ် အလှူတွေမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ကိုလည်း အလှူခံ တိုက်တွန်းထားတာ လည်း တွေ့ရပါတယ်..။
“29-3-2021 ဝေဠုကျော် ဖောင်ဒေးရှင်း မှ အလှူရှင်များ ကိုယ်စား ယနေ့ စားသောက် ရေးခက်ခဲ နေသော သဃ်န်းကျွန်းဇ / မြောက် ကျူးအိမ် များ နှင့် စက်မှု (၁)ဝန်ထမ်း အိမ်ထောင်စု ( ၅၅ ) စု သို့ တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ဆန် ( ၃ ) ပြည် ကြက်သွန် ငါးပိ တို့ကို သွားရောက် ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ ပါသည်။နောက်ထပ် လိုအပ် နေသူများ အတွက်လည်း အလှူခံ ပါတယ်။ဝေဠုကျော် ဖောင်ဒေးရှင်း 09455500010(K Pay) (U Soe Thein) 09455500014 . 09776089484(Wave Acc). .” ဆိုပြီး အလှူ ကို အသိပေး ဝေမျှရင်း ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်တဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ပြောပြ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ အလှူရှင် တွေရဲ့ကိုယ်စား ကိုယ်တိုင် သွားရောက် လှူဒါန်းထားတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ အလှူ ပုံရိပ်တွေကို လည်း အားလုံးက သာဓု ခေါ် ဆုတောင်းပေးထားကြတာလည်း တွေ့ရတာမို့ ပရိသတ်တွေ အတွက် တင်ဆက်မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်..။
သတင်းအရင်းမြစ်: Wai Lu Kyaw Foundation’s Fb Acc
ပရိသတျကွီးရေ.. အကယျဒမီ မငျးသားကွီး ဝဠေုကြျော ကိုယျတိုငျ ဦးစီး တညျထောငျ ထားတဲ့ ဝဠေုကြျော ဖောငျဒေးရှငျး ကတော့ အမြိုးမြိုးသော အခကျအခဲတှေ နဲ့ ရငျဆိုငျ ကွုံတှနေ့ကွေရတဲ့ ပွညျသူတှေ အတှကျ အမွဲ ဖေးမ ကူညီ တတျနတော ဖွဈပါတယျ..။ရရကျ သားသမီး အလှူရှငျ တှေ လှူဒါနျး ထားတဲ့ ငှကွေေး တှေ နဲ့ လိုအပျ နကွေတဲ့ ပွညျသူတှေ အတှကျ ပွနျလညျ လှူဒါနျးမှုတှေ ကို လုပျဆောငျနပွေီး လကျရှိ အခွအေနတှေေ မှာလညျး အငျတိုကျ အားတိုကျပါဝငျ အားဖွညျ့ လှူဒါနျး နတော တှရေ့ ပါတယျ..။
ပရဟိတ အလုပျတှေ နဲ့ လှူဒါနျးမှု တှေ နတေို့ငျးပွု လုပျနတေဲ့ ဝဠေုကြျော ကတော့ ဒီက နမှေ့ာလညျး စားဝတျ နရေေးခကျခဲ နတေဲ့ ပွညျသူတှေ နဲ့ စကျမှု ဝနျထမျးတှေ အတှကျ အစားအသောကျ တှေ ပေးဝေ လှူဒါနျးခဲ့ ပွနျပါတယျ..။သင်ျဃနျးကြှနျး က ပွညျသူတှေ နဲ့ စကျမှု ဝနျထမျးတှေ အတှကျ ဝဠေုကြျော က စားသောကျ ကုနျတှကေို ကိုယျတိုငျ ကိုယျကြ အိမျတိုငျရာ ရောကျ လိုကျလံ ပေးဝပွေီး လှူဒါနျးခဲ့တာ ဖွဈပွီး စတေနာရှငျတှေ အနနေဲ့ နောကျထပျ အလှူတှမှောပါဝငျနိုငျဖို့ကိုလညျး အလှူခံ တိုကျတှနျးထားတာ လညျး တှရေ့ပါတယျ..။
“29-3-2021 ဝဠေုကြျော ဖောငျဒေးရှငျး မှ အလှူရှငျမြား ကိုယျစား ယနေ့ စားသောကျ ရေးခကျခဲ နသေော သဃျနျးကြှနျးဇ / မွောကျ ကြူးအိမျ မြား နှငျ့ စကျမှု (၁)ဝနျထမျး အိမျထောငျစု ( ၅၅ ) စု သို့ တဈအိမျထောငျလြှငျ ဆနျ ( ၃ ) ပွညျ ကွကျသှနျ ငါးပိ တို့ကို သှားရောကျ ကူညီ ထောကျပံ့ပေးခဲ့ ပါသညျ။နောကျထပျ လိုအပျ နသေူမြား အတှကျလညျး အလှူခံ ပါတယျ။ဝဠေုကြျော ဖောငျဒေးရှငျး 09455500010(K Pay) (U Soe Thein) 09455500014 . 09776089484(Wave Acc). .” ဆိုပွီး အလှူ ကို အသိပေး ဝမြှေရငျး ဆကျသှယျ လှူဒါနျးနိုငျတဲ့ အကွောငျးကိုလညျး ပွောပွ ထားတာ ဖွဈပါတယျ..။ အလှူရှငျ တှရေဲ့ကိုယျစား ကိုယျတိုငျ သှားရောကျ လှူဒါနျးထားတဲ့ ဖောငျဒေးရှငျးရဲ့ အလှူ ပုံရိပျတှကေို လညျး အားလုံးက သာဓု ချေါ ဆုတောငျးပေးထားကွတာလညျး တှရေ့တာမို့ ပရိသတျတှေ အတှကျ တငျဆကျမြှဝေ ပေးလိုကျပါတယျ..။
သတငျးအရငျးမွဈ: Wai Lu Kyaw Foundation’s Fb Acc
အာဇာနည်သူရဲကောင်း ဖေဖေရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးလေးကို အနမ်းလေးနဲ့ နှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ သားသားလေး…
စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အလှူရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး တတ်နိုင်သလောက်ကူညီလှူဒါန်းနေတဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း